खेल कूटनीतिमा कमजोर नेपाल, छिमेकीको सिको किन गर्दैन ?
२०७५ असोज १५ सोमबार, कुनै पनि मुलुकलाई चिनाउनका लागि खेलकुदको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी साना मुलुकहरुलाई खेलकूदको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । त्यसैले साना मुलुकहरु आफूलाई विश्वमा चिनाउनका लागि खेलकुदको सहारा लिने गर्छन् । ... बाँकी अंश»
१८ वर्षसम्म अलपत्र बाहिरी चक्रपथ निर्माण कसरी हुन्छ ? (अन्तर्वार्ता)
२०७५ असोज ११ बिहिबार, २०५७ मा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारणा बनेर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भयो । १८ वर्ष पुरानो आयोजना अहिले आएर अन्योलमा परेको छ । ... बाँकी अंश»
आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीन र कतारको खेलकुद राजनीति
२०७५ असोज १० बुधबार, कतार र चीनको आँखा अहिले विश्वकप फुटबल तथा शीतकालीन ओलम्पिकमा केन्द्रित छ । दुवै मुलुकहरुले उक्त प्रतियोगिताका लागि उल्लेख्य रकम खर्च गरिरहेका छन् । यद्यपि यी प्रतियोगिताहरु खेलको मैदानको लागि भन्दा पनि मुलुकको स्वार्थका लागि प्रयोग हुनसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
चन्द्र भण्डारीको तार्किक सुझाव –‘सबल र सक्षम कांग्रेसका लागि कार्यकर्ताको अनुहार देखिने विधान, विधान अनुसार चल्ने पारदर्शी नेतृत्व’
२०७५ असोज १० बुधबार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बिपी कोइरालाले बनाएको पार्टीको विधानलाई समयअनुसार संशोधन गर्नका लागि यतिबेला सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ... बाँकी अंश»
चुनाव खर्च लिएकाले हिसाब किताब मिलाउन बुढीगण्डकी गेजुवालाई (अन्तर्वार्ता)
२०७५ असोज ९ मंगलबार, बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने कुरा आएपछि धेरै खाले टिप्पणी हुन थालेका छन् । ... बाँकी अंश»
नुरप्रसाद किन बदनाम हुँदैछन् ?
२०७५ असोज ९ मंगलबार, काठमाडौं । गोरखा फुजेलका स्वर्गीय नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीका छोरा नुरप्रसाद अधिकारी बदनामित हुँदै गएका छन् । ... बाँकी अंश»
के माल्दिभ्सले नरुचाएकै हो चिनियाँ प्रभाव ?
२०७५ असोज ८ सोमबार, काठमाडाैं । विगत केही समययता दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव अत्यधिक मात्रामा बढेको मुलुक हो – माल्दिभ्स । ... बाँकी अंश»
जंगबहादुरको खैरे सभ्यता र अहिलेको मर्दै गरेको नैतिकता
२०७५ असोज ८ सोमबार, राज्य व्यवस्थाहरु चाहे संसदीय होस्, राष्ट्रपतिय होस् मोनार्कियल होस् या चाहे अन्य कुनै, राज्य संचालनका लागि तत् राष्ट्रको शासकीय सिद्धान्तका आधारमा न्याय प्रणालीको विकास गरी न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गर्दै आएको हामी पाउँदछौ । ... बाँकी अंश»
साम्यवाद ताक्ने नेकपा हिटलरको फाँसीवाद अँगाल्दैछ ?
२०७५ असोज ७ आइतबार, काठमाडौं । नेपालमा पनि केही राजनीतिक दलले समय समयमा बोलिरहने फाँसीवाद यतिबेला विश्व राजनीतिमा पनि चर्चामा छ । ... बाँकी अंश»
यस्ताे रहेछ सार्वजनिक यातायातकाे भाडा बढाउनुकाे कारण (अन्तर्वार्ता)
२०७५ असोज ७ आइतबार, केही दिनअघि मूल्यवृद्धि भएर गाडी सञ्चालन गरिरहेका अर्थात् यातायात सेवा प्रदान गरिरहेका व्यवसायीले मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिई अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने भनेर अडान राखे । ... बाँकी अंश»
अग्रिम टिकट बुकिङमा सरकार नै मुख्य दाेषी, दशैँमा जनता रुवाउँदै (अन्तर्वार्ता)
२०७५ असोज ६ शनिबार, दशैंमा घर जान यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ भद्रगोल भएको छ । प्रालि सम्बद्ध व्यवसायीले शुक्रबारदेखि नै अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न थालेका छन् । ... बाँकी अंश»